Mo Farah oo waji-gabax kala kulmay Sarakiisha Socdaalka Maraykanka - Horseed Media
Mo Farah oo waji-gabax kala kulmay Sarakiisha Socdaalka Maraykanka December 30, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogle
Ordaaga kasoo jeeda Soomaaliya ee MO Farah, balse heysta dhalashada dalka Ingiriiska ayaa waji-gabax kala kulmay saraakiisha Socdaalka Maraykanka oo ku tuhmay inuu yahay Argagaxiso.
Mo Farah oo asagu 2 biladood oo dahab ah ku guuleystay Ciyaarihii Olymbikada ayaa lagu qabtay Airporka magaalada Portland ee gobalka Oregon ee dalkaasi Maraykanka.
Saraakiisha Socdaalka Maraykanka ayaa muddo saacado ah Airporka ku heystay MO Farah iyo reerkiisa ayagoo sheegay inay baaritaan ku sameenayaan inuu yahay Argagaxiso iyo in kale arrintan oo uu si weyn uga carooday Mo Farah. Sida ay qortay jariirada Daily Mail ee dalka Ingiriiska.
Mo Farah ayaa la sheegay in xataa uu banaanka uga soo saaray Boorsoonyinkii Labadii biladood ee dahabka ah ee Olymbikada ku qaatay orodka dheer ee 10-ka kun iyo 5ta kun, si uu u xaqiijiyo qofkuu yahay, kadib markii Saraakiisha Maraykanka sheegeen in baaritaan ay ku sameenayaan.
MO Farah ayaa sheegay arrintan ay salka ku heyso maadaama uu yahay ninkasoo jeeda asal ahaan dalka Soomaaliya, isla markaana marwalba oo uu tago dalka Maraykanka uu waji-gabax noocaan ah iyo juujuub uu kala kulmo saraakiisha Maraykanka.
Mo Farah ayaa safax u aaday dalka Maraykanka xili lagu jiro wakhtiga feestada oo amaanka dalkaasi Maraykanka si weyn loo adkeeyo, waxaana la socday dhamaan reerkiisa.
Mo Farah ayaa Airporka laga siidaayey kadib markii uu arrintan soo dhexgalay tababarihiisa Alberto Salazar oo u dhashay dalkaasi Maraykanka. Waxaa la sheegay in tababaraha Mo Farah uu la xariiray nin saaxiibkiisa ah oo ka shaqeeya Hayá da FBI, sidaana lagu siidaayey Mo Farah iyo reerkiisa.
Mo Farah ayaa horey u heystay fiiso degenaansho oo dalkaasi Maraykanka ah, waxaana degenaanshihiisaas u sameeyey shirkada maalgelisa ee NIKE.
Fiisaha degenaashaha ee MO farah ayaa la sheegay inay ka dhamaatay, isla markaana lagu khasbay inuu dalka ka baxo oo hadana dib usoo qaato fiiso cusub. Mo Farah ayaa maalmo fasax u aaday magaalada Toronto ee dalka Canada, kadibna kusoo noqday dalka Maraykanka.
Mo Farah ayey saraakiisha qabsaday u dhiibeen waraaq ay ku qorontahay in lagu wado baaritaan lagu eegayo inuu yahay argagaxiso khatar ku ah amniga dalka Maraykanka.
Arrintan qabsatay Mo Farah ayey horey usoo mareen kumanaan Soomaali ah oo dhibaato badan ka qabsata Airporada dalka Maraykanka xiliga ay dhoofayaan, ayadoo il gaar ah lagu hayo dadka Soomaalida ah tan iyo intii ururka Al Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya lagu daray listiga ururada uu Maraykanka u aqoonsan yahay Argagaxisada.